Imbali yeSifo Sikashukela: Indlela I-insulin Efunyanwe ngayo
Uvavanyo olukhokelela ekufunyanweni kokuqala kwe-insulin-ihomoni eyenziwa kwi-pancreas elawula umlinganiselo we-glucose kwigazi-phantse ayizange kwenzeke.
Iminyaka yenzululwazi ikhumbule ukuba imfihlo yokulawula amazinga aphakamileyo e-glucose-ibeka kwiindawo zangaphakathi zepakreta. Kwaye, ngo-1920, udokotela ogqirha waseCanada ogama linguFrederick Banting waya kwinqununu yeSebe le-physiology ye-University of Toronto ngengcamango yokufumana loo mfihlelo.
I-Banting ikholelwa ukuba i-hormone eyimfihlakalo yayikhiqizwa kwicandelo le-pancreas ebizwa ngokuba yiiLangerhans. Wachaza ukuba i-hormone yachithwa yi-pancreas 'digestive juices. Ukuba unako ukuvala ii-pancreas kodwa ugcine iziqithi zeLangerhans zisebenza, unokufumana into ekhoyo ekhoyo.
Ngethamsanqa, amandla e-Banting ayenayo kwaye inkulu yesebe uJohn McLeod yamnika indawo yebhu lab, i-hormone ye-10 ye-Langerhans ngaphambi kokuba ibe yodwa. Ukuba unokumisa i-pancreas ekusebenzeni, kodwa gcina iziqithi zaseLangerhans ziya, kufuneka zikwazi ukufumana izinto! izinja zokulinga, kunye nomncedisi wezonyango obizwa ngokuba nguCharles Best. Ngo-Agasti ka-1921, i-Banting ne-Best iphumelele ukukhipha ama-hormones ukusuka kwiziqithi zaseLangerhans-ezibizwa ngokuba yi-insulin emva kwegama lesiLatini kwisiqithi. Xa befaka i-insulin kwizinja ezinezinga eliphezulu lokushukela kwegazi, loo mazinga ahlawuleza.
NjengoMcLeod ethatha inzala, aba bantu basebenze ngokukhawuleza ukuphindaphinda iziphumo baze bamise ukuqhuba uvavanyo kwisifundo somntu, u-Leonard Thompson oneminyaka eyi-14 ubudala, obone ukuba izinga lakhe leswekile liphantsi kwaye umchamo wakhe ususwe.
Iqela lipapashile iziphumo ngo-1923 kunye noBanting noMcLeod banikezwa umvuzo weNobel weMithi (uBanting wabelane ngemali yakhe yebhanki ngeyona ndlela ihamba phambili).
Ngomhla ka-Juni 3, 1934, uBanting waxutywa ngenxa yokufumana unyango. Wabulawa ngengozi yomoya ngo-1941.
Imbali ye-Oven esuka kwi-Iron Iron ukuya kuMbane
Indlela yokuguqula i-Celsius ukuya eKelvin
Imigudu eya eNtshona kwi-American Settlers
Hlola kwaye Hlaziya Inkqubo Yakho Yokubhala
Yithini I-Classic Classic?